XOG: Xildhibaano Hal arrin darteed loogu diiday iney la kulmaan Madaxweyne Farmaajo – War La Helaa Talo La Helaa
By Xuseen Madoobe	 Last updated Dec 5, 2018
Xildibaano ka tirsan golaha shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo diiday iney la kulmaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilli ay taagan tahay xiisada warbixintii iyo kala dirista Guddiga Maaliyadda.
Illo ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in xubno xildhibaano ah oo ka tirsan Guddigii Maaliyadda ee la kala diray dalbadeen iney la kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed C/llaahi Farmaajo si ay uga hadlaan arrinta muran badan dhalisay balse laga hor istaagay.
8-da xubnood ee iyagu gudbiyay warbixint guddiga Maaliyadda ee muranka badan dhalisay ayaa la sheegayaa iney iyagu ahaayeen Xildhibaanada dalbaday iney la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur oo ah Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha shacabka ayaa si hoose inoogu sheegay in mas’uuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya uusan carabaabin magacyadooda ka hor istaageen iney cabashadooda u gudbiyaan madaxweynaha Soomaaliya,wuxuuna hoosta ka xariiqay iney jiraan shaqsiyaad qas iyo fowda ka wada xafiisyada Dowladda kuwooda ugau sareeya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan iyo Madaxtooyada Soomaaliya ayaa isku mari la’ qodobo uu ka mid yahay arrinta kala dirista Guddiga Maaliyadda Golaha shacabka.
Waxaa muuqaneysa inuu jiro guux siyaasadeed oo hakad geliyay shaqadii Baarlamaanka Soomaaliya,wuxuuna guddoomiye Mursal ku adkeysanayaa in sharciga markasta uu sareynayo wixii uu qabana lagu dhaqmayo.
Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay iney cadaaladda soo taagto Ragii dilay Shiikh Cabiweli Cali Cilmi